ကျွန်တော်တို့အားကျရတဲ့စတားဖြစ်ခဲ့သူ G A C H A P I N နှင့် M U K K U - JAPO Japanese News
ကျွန်တော်တို့အားကျရတဲ့စတားဖြစ်ခဲ့သူ G A C H A P I N နှင့် M U K K U
လာ 09 Nov 2020, 10:06 မနက်
ကျွန်တော်ကလေးဘဝက နေ့တိုင်းတစ်ရက်မပြတ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ တီဗွီအစီအစဥ်တစ်ခုရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ Fuji TV ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ ကလေးအစီအစဥ် “ひらけ！ポンキッキ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အစီအစဥ်ထဲမှာတော့ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာတွေပါဝင်ပြီး၊ သဘာဝတရား၊ လူမှုရေး၊ စကားလုံး၊ ကိန်းဂဏန်း၊ စည်းကမ်း၊ စည်းချက်(ဂီတ)၊ အာရုံ(၅)ပါး စတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ၇ ခုပါဝင်ကာ၊ ကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေကို မငြီးငွေ့စေတဲ့အပြင် ဗဟုသုတအသိများပို၍တိုးစေပါတယ်။
ကလေးတွေ အလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်တဲ့သီချင်းများနဲ့ ခုချိန်ထိသီချင်းမဖွင့်ရင်တောင်ဆိုနိုင်တဲ့အထိ၊ ခေါင်းထဲမှာသေသေချာချာလေးစွဲသွားစေတဲ့ ဂီတများလည်း အများကြီးပါဝင်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဥ်ထဲမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားမှာကတော့…. သူတို့ ၂ ဦးပါပဲ။
G A C H A P I N နဲ့ M U K K U !!!!
ထိုအထဲမှာလည်းကျွန်တော်အပါအဝင် ယောက်ျားလေးများအရမ်းသဘောကျခဲ့တာက၊ G A C H A P I N လေးရဲ့ အားကစားအမျိုးမျိုးကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ အချက်ပါ။
ဒီအစီအစဥ်အားဖြင့် အားကစားတော်တော်များကို ပထမဆုံးအနေနဲ့သိလိုက်ရတဲ့အပြင်၊ အားလုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ G A C H A P I N လေးဟာ ကလေးတို့အားကျရတဲ့စတားတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကရာတေးလို့ပြောလိုက်ရင် ကြွေပြားခွဲတာလို့သိကြပေမဲ့၊ ဒီအစီအစဥ်မှာပဲစိန်ခေါ်ပြီး သားသားမီးမီးတို့သေသေချာချာသိသွားအောင် လက်တွေ့ပြသပေးပါတယ်။
ကောင်းကောင်းမြင်ရပါ့မလား? ဆိုပြီး စိတ်တောင်မပူဘဲ တောင်ကုန်း ကမုကထစ်တွေကနေဆင်းလာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာပဲ training wheelsကိုဖယ်ပြီးစက်ဘီးစစီးလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာ G A C H A P I N လိုပဲလိုက်ပြီးလုပ်ကြည့်ချင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုကျိုမှာအဲ့ဒီလိုနေရာတွေမရှိတာကြောင့် မလုပ်လိုက်ရပါဘူး။
ဒါနဲ့ပဲ အနီးမှာရှိတဲ့လှေကားကို စက်ဘီးနဲ့ဆင်းကြည့်မယ်လို့စိန်ခေါ်လိုက်ပြီး လှေကားထစ်နည်းနည်းလောက်ဆင်းကြည့်မယ့်အချိန်မှာ ကြောက်ကြောက်နဲ့ဒူးတွေလည်းတုန်နေလို့ကောင်းကောင်းမဆင်းလိုက်ရဘဲ၊ တလိမ့်ခေါက်ကွေးပြုတ်ကျသွားတာကိုတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။ (ရယ်လျက်)
အဲ့ဒီမှာတွေးမိလိုက်တာက G A C H A P I N တကယ်တော်ပါလားဆိုတဲ့ လေးစားမှုပါပဲ။
ငယ်ငယ်လေးထဲက လေထီးခုန်တဲ့လူတွေကိုအရမ်းအားကျခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာ ကြီးလာရင်သေချာပေါက်လုပ်မယ် ! ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ (ကလေးအတွေးနဲ့ပေါ့)
ဒါနဲ့အသက် ၂၄ နှစ်ရောက်လာတော့ ပထမဆုံးလေထီးခုန်ကြည့်ဖို့ challenge လုပ်လိုက်တဲ့အချိန် G A C H A P I N ကိုပြန်ပြီးသတိရခဲ့တယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အမျိုးမျိုးသောတီဗွီအစီအစဥ်မှာ သားသားမီးမီးတို့အကြိုက်ဇာတ်ကောင်အမြောက်အများရှိပေမဲ့၊ သူတို့တွေပင်လယ်ထဲအထိ ရေငုပ်ဖူးပါသလား?
ပင်လယ်အနက်ထဲမှာသာမကဘဲ၊ ရေပြင်ပေါ်မှာပါ အထူးကျွမ်းကျင်တာက G A C H A P I N ရဲ့ချီးကျူးစရာကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဝတ်စုံကြီးနဲ့ လှလှပပလှိုင်းစီးနိုင်ရသလဲနော်?
ရေလွှာလျှောစီးဖူးသူတွေဆိုရင် ဒီလိုပုံစံနဲ့စီးနိုင်ဖို့ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမလဲဆိုတာကို နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
လှိုင်းစီးတာထက်ပိုလွယ်မှာပဲ? လို့ထင်မိခဲ့ရင် Wind surfing မလုပ်ဖူးတာသေချာတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် Guam ရဲ့ ပင်လယ်မှာ ငှားပြီး Wind surfing ကို challenge လုပ်ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လုံးဝထင်ထားတဲ့အတိုင်း မဖြစ်ဘဲ၊ တစ်ဖြည်းဖြည်းလှိုင်းနဲ့ပါသွားပြီး နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုပြန်ကယ်ဆယ်လိုက်ရတယ်။ အမှတ်တရလေးပါ။
မျှောသွားပြီးကြောက်နေတဲ့အချိန် စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ G A C H A P I N အကြောင်းကိုလုံးဝသတိမရခဲ့ပါဘူး။
လှိုင်းစီးရတာနဲ့တင် တော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပါပြီ။ ဒါကိုတောင်မှပိုပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတာကတော့ Wake Board ပါပဲ။
G A C H A P I N ရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့အထိဟန်ချက်ညီညီထိန်းနိုင်မှုက သားသားမီးမီးတို့အကြိုက်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့နံပါတ် ၁ ပဲလို့ထင်ပါတယ်။
Yabusame ဆိုတာကတော့ ဂျပန်ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မြင်းစီးပြီး တစ်ဟုန်ထိုးပြေးနေရင်းနဲ့၊ ပစ်မှတ်ကိုချိန်ကာမြှားပစ်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေး ခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပါ။
ဒီအချက်နဲ့တင်ကျွန်တော် challenge မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးရယ် (ရယ်လျက်)
ရွေ့လျားနေတဲ့ကားထဲကနေ ပစ္စည်းတစ်ခုကိုလှမ်းပစ်ရင် ပစ်မှတ်ကိုဘယ်လိုမှမထိနိုင်ဘူးဆိုတာ စာဖတ်သူတို့မြင်ယောင်ကြည့်နိုင်မှာပါ။
ခုန်ပေါက်နေတဲ့မြင်းပေါ်ကနေ ပစ်ဖို့ဆိုတာ ပိုလို့တောင်ခက်ပါသေးတယ်နော်။
ဒါကိုတောင်မှ ပစ်မှတ်ကွက်တိထိတာကြောင့် G A C H A P I N ဟာအရမ်းတော်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးတို့အတွက်အစီအစဥ်ဖြစ်ပေမဲ့ အသက်ကြီးလာလို့အခုချိန်မှာပြန်ကြည့်လည်း ကျွန်တော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတုန်းပါ။
မဟုတ်သေးဘူး လူကြီးဖြစ်လာလို့ အားကစားတစ်ခုချင်းစီကဘယ်လောက်တောင်ခက်ခဲသလဲ နားလည်လာတာကြောင့်၊ ပိုလို့တောင် စိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားပြသမှုကိုကြည့်ရင်း သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပြီး မျိုးဆက်တူကလေးတွေလည်း ဒီဇာတ်ကောင်လေးကိုချစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုး ၉၅ % ခန့်လောက်ဟာ နာမည်ကိုချက်ချင်းပြောနိုင်လောက်တဲ့အထိ အသိအမှတ်ပြုကြပါတယ်။
G A C H A P I N နဲ့ M U K K U ဟာ ကလေးအများစုရဲ့ အိပ်မက်နဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပေးခဲ့တဲ့အပြင် ဒီအစီအစဥ်က သူတို့တွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ အစီအစဥ်ကောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကလေးများအားလုံးလည်း ဒီအစီအစဥ်လေးကိုကြည့်နိုင်မယ့်နေ့ရောက်လာဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
ကုမ္ပဏီသောက်ပွဲတွေမှာကြားရတဲ့ မိန်းကလေးအများစုရဲ့ ပရိယာယ်စကား !!!!
Urashima Taro (လိပ်)ပုံပြင်ရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နောက်ခံသမိုင်း !!!!
Maiko လေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုဆော့ကြလဲ?
လောင်းကစားရောဂါမှာ ကျရှုံးနေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦး